“नेपाल’मा उ’त्पादन भएको सबै’भन्दा महँगो रक्सी ‘यार्चा’गुम्बा’, ब’जार मू’ल्य क’ति प’र्छ ?” – Krazy NepaL
“नेपाल’मा उ’त्पादन भएको सबै’भन्दा महँगो रक्सी ‘यार्चा’गुम्बा’, ब’जार मू’ल्य क’ति प’र्छ ?”
November 22, 2020 2874
नेपाल’मा उत्पा’दन भए”को महँगो रक्सीको कु’रा गर्दा स्व’देशीको र’क्सीको तु’लनामा वि’देशी र’क्सीको मू’ल्य निकै बढी हुन्छ । रक्सी पारखीहरु’का लागि वि’भिन्न ब्राण्ड र विभिन्न स्वाद’मा उपलब्ध रक्सी पि’उन मन परा’उँछन् ।
बजारमा आएको रक्सी ‘यार्चागुम्बा’ स्वदेशी उत्पादनका हिसाबले सबैभन्दा महँगो रक्सी हो । तर महँगा रक्सीमा विदेशी रक्सी पर्छन् ।
‘यार्चागुम्बा’ रक्सीको मूल्य ११ हजार रुपैयाँ पर्छ । हाल स्वदेशसँगै विदेशमा पनि यो रक्सी निर्यात हुन शुरु गरिसकेको छ । बजारमा आएको छोटो समयमै १० हजारभन्दा बढी बोतल ‘यार्चागुम्बा’ बिक्री भइसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित ग्रिनलाइन सेन्टरमा विदेशी मदिरा मात्रै उपलब्ध छन् । जहाँ हरेक प्रकारका वाइन, स्याम्पेन, ह्विस्की, ब्राण्डीहरु उपलब्ध छन् ।
यो पसलमा सबै’भन्दा महँगो रक्सी ‘क्यामुअस कोन्याक ५.१५०’ छ । यो रक्सीको मूल्य ६ लाख ७ हजार २०५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस’को बोतल हात’बाट बनाइ’एको हो । यो ब्रा’ण्डी अंगु’रको बोक्रा’लाई ४० वर्ष’सम्म लगाएर बनाइएको हो ।
त्यसबाहेक नेपाल’मा उप’लब्ध अ’र्को महंगो र’क्सी हो ‘रोयल सल्युट ६२ गन सल्युट’ । यो रक्सीको मूल्य एक लिटरको बोतलका लागि ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अर्को महं’गो र’क्सी ‘लुई १३औं कोन्याक’ हो । यसको मूल्य ४ लाख ९० हजार रुपै’याँ पर्छ । यस’को बोतल’मा सुन’ले ले’पन गरिएको छ । सा’थै महं’गो सिंगल मा’र्टको मूल्य २ लाख ३८ ह’जार रुपैयाँ’सम्म पर्छ ।
**************यस समाचारको पुरा लिंक तल भीडीयोमा रहेको छ***************
Prev“संसार’को पहि’लो पुरु’ष जो तीन प’टक सुत्के’री भै बच्चा जन्मायो “
Next“सक्छौ भने हुन्छ भन्दै आफ्नो बुढाको अगाडी नै बोलायो भान्जालाई बुढाले गर्दियो भीडीयो आउट”
चर्चित नायिका आँचल शर्माले खोलीन् आँफु गर्भवती बनेको रहस्य
स्वात्तै घट्यो कुखुराको मूल्य, आँखिर किन ? हेर्नुस kg को कति..?
पशुपतिनाथको दर्शन गरि आज कार्तिक २३ / Nov-8आइतबार तपाइँको भाग्य कस्तो छ ? राशिफल हेर्नुहोस्